ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအချို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း | Lumyo Chit
အလုပ်အကိုင် – ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ သမိုင်း မသန်စွမ်း အထူးကုဆေးရုံ၌ လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့။
နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ – ၈၈ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုမှု လှုပ်ရှားမှုတွင် မသန်စွမ်း ဆေးရုံဝန်ထမ်းများကို ဦးဆောင်၍ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး တောင်းဆိုခဲ့။ ၁၉၉၆ ခုနှစ် မေလတွင် တစ်ကြိမ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် တစ်ကြိမ် ရဲမွန်တပ်မြို့၌ထိန်း သိမ်းခံခဲ့ရ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် လူငယ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဒ်မ ၅(ည)ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ကျခံခဲ့ရ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် လွတ်ရက်စေသော်လည်း ပုဒ်မ ၁၀(က)ဖြင့် လေးနှစ်အကြာ ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ခံရ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၌ ပြန်လည်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ။
နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ – ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲတွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဘက်မှ မဲဆွယ်ဟောပြောခဲ့။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အစိုးရနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကိစ္စရပ်များ တွင်ပါဝင်ခဲ့။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်ခဲ့။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ တည်ထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့။ ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရေး သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပ။ ၂၀၁၀ တွင် မြန်မာဒီမိုကရေစီ ကွန်ဂရက်ကို တည်ထောင်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့။၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရခဲ့။
လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ – ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ရင်း နယ်မြေလူထု အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်စေသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လူထုအားကိုယ်စားပြု၍ တရားရုံးများတွင် တိုင်ကြားပေးခဲ့။
အလုပ်အကိုင် – ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၈)ကို မှော်ဘီမြို့တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တပ်မတော်တွင် ဗိုလ်မှူးအဆင့်(ဒုတိယတပ်ရင်းမှူး)အထိ ၂၆ နှစ် တာဝန်အဆင့်ဆင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသို့ လက်ထောက် အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်မှ အနားယူခဲ့သည်။
လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှု – ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်အထိ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဝေဒနာရှင်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိ။
နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘိုကလေးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)တွင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ကိုယ်စားပြု ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့။ လက်ရှိတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ဘိုကလေးမြို့နယ် လူငယ်တာဝန်ခံ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်၊ ဗဟိုအမျိုးသမီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်၊ ဗဟိုဥပေဒအကြံပေး အဖွဲ့ဝင် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ
This entry was posted in konwledge and tagged Knowledge. Bookmark the permalink.
← မြန်မာအစ တကောင်းက – – –
ရေပိုင်နက်အငြင်းပွားမှုမှာ ဘာကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအနိုင်ရသလဲ →